Iwu nzuzo | WatercolorPNG
Email Marketing (ma ọ bụrụ na ọdabara): Site na ikikere gị, anyị nwere ike iziga gị ozi ịntanetị banyere ụlọ ahịa anyị, ngwaahịa ọhụrụ, na mmelite ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na anyị rịọ maka ozi nkeonwe gị maka ihe nke abụọ, dịka ahịa, anyị ga-ajụ gị ozugbo maka nkwupụta nkwupụta gị ma ọ bụ nye gị ohere ịsị mba.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye, ị gbanwee obi gị, ịnwere ike ịhapụ nkwenye gị ka anyị kpọtụrụ gị, maka nchịkọta, ojiji ma ọ bụ ikpughe nke ozi gị, n'oge ọ bụla, site na ịkpọtụrụ anyị na info@watercolorpng.com ma ọ bụ emailing anyị na:
Ụlọ ahịa anyị na-echekwa na Shopify Inc. Ha na-enye anyị ụlọ ọrụ ịntanetị na e-commerce nke na-enye anyị ohere irere ngwaahịa na ọrụ anyị.
A na-echekwa data gị site na nchekwa data data dị na Shopify, na ọdụm ahịa Shopify. Ha na-echekwa data gị na ihe nkesa dị nchebe n'azụ firewall.
Ọ bụrụ na ị na-enye anyị ozi kaadị akwụmụgwọ gị, ezoro ezo ozi ahụ na iji teknụzụ oyi akwa (SSL) ma chekwaa ya na ezipụ AES-256. Ọ bụ ezie na usoro ntinye ọ bụla nke Intanet ma ọ bụ nchekwa nchekwa bụ 100% echekwara, anyị na-agbaso ihe niile PCI-DSS chọrọ ma mejuputa ụkpụrụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ a nakweere.
Ọ bụrụ na ịchọrọ: ịnweta, dozie, dozie ma ọ bụ hichapụ ozi ọ bụla anyị nwere banyere gị, debanye aha mkpesa, ma ọ bụ naanị chọrọ ka ọmụma ndị ọzọ kpọtụrụ Onye uwe ojii nzuzo anyị na info@watercolorpng.com ma ọ bụ site na mail na
WatercolorPNG,anọchite anya ya Vadim Rozov, S. Kovalevskoy 49 / 64 Dnipro, 49000 Ukraine